Native Kushambadzira: Nzira Nyowani Yekusimudzira Zvako Zvigadzirwa | Martech Zone
Native Kushambadzira: Iyo Nyowani Nzira Yekusimudzira Zvako Zvigadzirwa
China, November 15, 2018 Svondo, November 18, 2018 Samantha Gilbert
Kana iwe wanga uchishambadzira zvigadzirwa zvako kwenguva yakareba uine zvishoma munzira yemhedzisiro, saka inguva yawakafunga kushambadzira kwazvino semhinduro isingagumi kumatambudziko ako. Zviziviso zvechizvarwa zvinokubatsira, kunyanya kana zvasvika pakusimudzira mashambadziro ako enhau enhau pamwe nekutyaira vashandisi vakanangwa kune zvako zvemukati. Asi kutanga, ngatipindei mukati chii icho yezviziviso zvemuno tisati tafunga nezvazvo sei.
Chii chinonzi Native Advertising?
Tsananguro yakanyanya kushandiswa yechiziviso yemuno ndiyo imwe neiyo Content Marketing Institute, iyo inotsanangura kushambadzira kwemuno se:
Chero ipi nzira yekushambadzira yakabhadharwa inoendesa ruzivo rwakanyanya kunongedzerwa, runonakidza, uye runobatsira kune vateereri vako zvekuti rinosiyaniswa kubva kune zvisiri-zvekushambadzira kana zvemukati zvirimo.
Iri kushambadza nenzira iyo vateereri vako vasingakurumidze kududzira zvirimo sechishambadziro asi vachizviona sezvazviri zvemukati Pamusoro pezvo, zvemukati zvatova zviviri zvinobatsira uye zvinonakidza kune vateereri vako saka zvinoita kunge zvisingaite kana kuregedza-kuisa
Zviziviso zvechizvarwa zvinouya nenzira dzakasiyana uye saizi. Iwe unogona kuzviita paGoogle muchimiro cheyakabhadharwa mitsva yekutsvaga. Iwe unogona zvakare kuzviita pasocial media nenzira yechinotsigirwa kana kukwidziridzwa zvinyorwa paFacebook, zvinotsigirwa zvidzoreso paLinkedIn, uye inosimudzira zvinyorwa pa Twitter. Iwe unogona zvakare kutumira zvinyorwa panzvimbo dzakakwirira dzemasimba senge Iyo New York Times, Iyo Huffington Post, BuzzFeed, uye Forbes. Iwe unogona zvakare kushandisa zvemukati zvinokurudzira injini kuti uite yako yemuno kushambadzira. Aya ndiwo marondedzero ezvinyorwa zvinokurudzirwa kubva kune ese internet zvinowoneka pazasi pezvinyorwa zvaunoverenga pane mamwe mawebhusaiti.
Saka unobatanidza sei zviziviso zvemuno mumushandirapamwe wako wekushambadzira?
Iva Nezvinangwa Zvakajeka
Zviziviso zvechizvarwa zvine mabhenefiti mazhinji zvisinei nekuti vanoita chimiro chipi. Ivo vanogona kukubatsira iwe kuvaka ruzivo uye kuvimba kwechako chiratidzo pamwe nekukubatsira iwe kuwana vamwe vanyoreri vezvako zvemukati. Imwe yakakosha mukana ndeyekuti haufanire kugara uchibuditsa zvinyorwa zvitsva. Unogona kukwezva vateereri vatsva uchishandisa zvinyorwa zvawanga watoburitsa kare. Kune mamwe mabhenefiti iwe aunowana neyekuzvarwa kushambadza, senge zvemagariro humbowo uye inoshanda SEO yechako chako. Zviziviso zvevoruzhinji zvinounganidza humbowo hwemagariro muchimiro chekufarira uye makomenti, kusiyana nemamwe mashambadziro echinyakare. Kana iwe ukasimudzira zvaunotumira pasocial media chikuva, iwe unosvika kuendesa meseji yako kune yakakura vateereri, zvinoreva kuti iwe unowana yakawanda traffic kune yako blog kana yako webhusaiti Kushambadzira kweNative kunonyanya kubatsira kana iwe uchangotanga uye usati uine SEO yako muhurongwa izvozvi.
Nemhando yehukama hwemagariro iwe yaunowana kubva kune vekumusha kushambadzira, meseji yako inoita senge yakatendeka uye nekudaro inogona kuenda kutapukirwa Kana vanhu vazhinji vachiziva chako hachizi, zvinogona kushandura kuva chiremera chepamusoro chechiratidzo chako nenzira yemasaini masocial link, izvo zvinogona kubatsira kuti saiti yako ive yepamusoro.
Nekushambadzira kwemuno, iwe unogona zvakare kukura zvakanyanya vateereri vako pasocial media. Zvako zvinotsigirwa nezvakatumirwa paFacebook neTwitter zvinogona kuunza vateveri vatsva uye zvavanofarira, kunyangwe chete kana zvirimo zvichinzwika nevaoni.
Hunhu pamberi pehuwandu
Kuti uwane zvakanakisa kubva pane zvisina kunaka kushambadzira, uchafanirwa kugadzira zvemukati zvinopa kukosha kune vaverengi vako, zvinonakidza, uye zvakare zvinokwezva kutariswa. Erin Schneider, mupepeti pane yepamhepo yakachipa yekunyora rondedzero sevhisi, anoti,
Chero zvaunoita, usagadzira zvemukati zvinoita sekunge uri kukanda chigadzirwa chako. Vanhu havadi kutengeswa pachena.
Kutanga, ita shuwa kuti iwe unoburitsa zvirimo mune yemuno shambadziro pawebhusaiti yako. Iwe unofanirwa zvakare kuve nechokwadi chekuti mhando yezviri mukati yakakwira, kuti inosanganisira kufona kuti chiitwe, uye kuti chakanangidzirwa kune vateereri chaivo vasingazowone ichivhiringidza.
Shandisa Zvakanaka Targeting
Nguva dzose enda kune vashandisi vatove vatengi vako kana zvakanyanya kufanana nevatengi vako. Iwe unofanirwa zvakare kushandisa kudzosera kumashure kune yako mukana, kuenda kune vanhu vakatoshanyira webhusaiti yako kare kuti vaone chero zvigadzirwa zvako kana masevhisi.
MaNative Ads anoshanda kunze kweSocial Media, Zvakare
Sezvatakambotaura pakutanga, kushambadzira kwemuno kunosanganisira zvinopfuura zvinongosimudzirwa pamasocial media. Iwe unogona zvakare kunyora zvakatsigirwa zvinyorwa pane epamusoro midhiya saiti senge Forbes uye Buzz Feed. Izvi zvinyorwa zvinokwezva kutarisisa kune yako brand uye zvinogona kutochinja zviripo zvisirizvo maonero nezve rako brand.
Zvichienderana nekuti bhajeti rako rakasimba sei, iwe unowana zvakare zvemukati zvekurumbidza masevhisi anobatsira. Vanogona kuwedzera zvinoshamisa huwandu hwemaonero aunowana pane zvako zvemukati nekuzviisa mukati mesaiti yemuparidzi mukuru.
Zvisinei iwe unozvitarisa, kushambadzira kwemuno kunobatsira, nevazhinji vevashambadzi ikozvino vachishandisa nemazvo. Iyo inzira yakanaka yekubata vateereri vatsva uye kuti utore chiratidzo chako kunze uko.
Tags: kushambadzira kwazvinochigadzirwa kusimudzirachii chiri chizvarwa kushambadzira
Samantha R. Gilbert anga achishanda semunyori wenhau kukambani inodhinda pamhepo muNew York, USA kwemakore maviri. Iye zvakare inyanzvi yekunyora nyanzvi mune dzakadai nyaya senge kublogi, hunyanzvi hwazvino, uye dzidzo.
Webhusaiti Kudzoreredza: Maitiro Ekugadzira Akawanda Mawebhusaiti Shanduko